Allgedo.com » Qaraxyo lagu weeraray halka uu ka soconaayay Shirka Ergada Ansixinta Dastuurka cusub ee Soomaaliya.
Home » News » Qaraxyo lagu weeraray halka uu ka soconaayay Shirka Ergada Ansixinta Dastuurka cusub ee Soomaaliya. Print here| By: allgedo.com:
Jawaabaha waa la xiray Qaraxyo Ismiidaamin ahaa ayaa saaka waxaa lagu weeraray halka uu ka soconaayo Shirka Ergada Anisinta Dastuurka cusub ee Soomaaliya, waxaana qaraxyadaasi geestay dad naftooda soo biimeeyay.
Dowladda TFG waxay sheegtay in qaraxaasi ay ku dhinteen dadkii is miidaamiyay islamarkaana aanay jirin cid kale oo waxyeelo halkaa kusoo gaartay.
Si kastaba maalmahaan ayaa magaalada Muqdisho waxaa ka soconaayay shirka anisinta dastuurka cusub ee Soomaaliya, waxaana maanta si toos ah u socda u codeenta dastuurka oo cod gacan taag ah lagu ansixinaayo.